Factory Plater Holder Holder, mpamatsy - Mpanamboatra mpametaka anarana China
MOQ fatra fatra ambany indrindra 400pcs, Arakaraka ny habetsany, ny mora kokoa. Fonosana sary miendrika 24pcs / ctn Namboarina namboarina habe 9.7 × 3.5x5cm Logo Azonao atao ny manamboatra ny logo tianao, fa tsy afaka manimba. Milanja 50g / pc Lokon'ny loko mangarahara, fotoana santionany Fotoana 7 andro ora fandefasana 3000sets ao anatin'ny 10 andro Fe-potoana fandoavana T / T EXW 30% T / T mialoha, nandoa ny fandanjana alohan'ny fandefasana FOB L / CL / C vola mihoatra ny 50,000 usd, afaka manaiky L / C amin'ny ...
Mpihazona marika akrilika milomano miaraka amina Brochure Pocket Desktop Sign Holder Plastika
Fitaovana akrilika avo lenta avo lenta (PMMA) OEM & ODM ekena fonosana santionany Fotoana alaina ao anatin'ny 5 andro Logo Azo alaina amin'ny pirinty sy Custom Logo Shape Square na ampanjifaina kalitao 100% antoka kalitao Vidy mifaninana Factory Direct Price Surface avo henjana sy fisaka Endri-javatra maoderina, kanto , faritra malama
Kiraro mangarahara acrylic mampiseho mpihazona fisoratana anarana ho an'ny super mall
Anaran'ny vokatra Transparent kiraro akrilika fampirantiana mijoro mpihazona for super mall Material Acrylic Color Transparent Function Holding kiraro fonosana 500 pcs / ctn fonosana haben'ny 50 * 40 * 35cm Fomba fandefasana amin'ny express, amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra Lead time 3-7days
Wood Base Acrylic latabatra fanambadiana mari-pana ho an'ny mpihazona Sheetsign
Oak Wood sy High Clear Acrylic 10 napetraka amin'ny hazo fototra Ary Clear Acrylic Sheets tafiditra. Ireto mpihazona karatra ireto dia tsotra tsara tarehy, vita amin'ny hazo ary malama, Mavesatra sy mateza, hazo miorina amin'ny alitara miaraka amin'ny halavany, ny takelaka acrylic dia mazava toa ny kristaly, afaka mampiditra hazo fototra mora foana. Miasa tsara toy ny laharan'ny latabatra, mpihazona sonia kely na mpihazona karatra menio. Tonga lafatra ho an'ny kafe, trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany, fampakaram-bady, fety, fanasana, buffet, fandroana mpanambady na hetsika fankalazana rehetra. Wood ta ...
Famolavolana anarana tsotra Plate Acrylic Name Card Holder
Product Material Acrylic-friendly Acrylic, Plexiglass, Perspex, Lucite Famaritana 1. Ny sary hoso-doko dia raisina an-tanan-droa. 2. Ny habe dia azo namboarina na fepetra hafa. 3. Ny hatevin'ny dia mety ho 5,8,10mm eo ho eo, na tabilaila akrilika voarindra 4. mazava / mazava. 5. Voalamina nohosorana. Tombontsoa 1. Ireo mpihazona kara-panondro acrylic isan-karazany novokarinay dia tena ilaina sy amin'ny endrika lamaody. 2. Ireo mpihazona kara-panondro akrilika rehetra avy aminay dia vita amin'ny ravina plastika ambony. 3. Ny anarana acrylic ...
Mijoro fisehoana acrylic mpihazona karatra orinasa, mpihira karatra anarana acrylic mazava ho an'ny birao
1. Ny fijoroana amin'ny karatra acrylic dia manana mangarahara avo, endrika tsotra, vokatra tsara fampisehoana. 2. Ataovy manintona sy mahavariana kokoa ny vokatrao. 3. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny fivarotana ny vokatrao. 4. Mety amin'ny orinasa, trano fandraisam-bahiny, fampirantiana, fampisehoana karatra fiantsenana. 5. Tongasoa ny famolavolana ny mpanjifa. 6. Mpanamboatra 100% manana traikefa mihoatra ny 15 taona. 7. Fifidianana fitaovana tsara indrindra avy amin'ny mpamatsy azo antoka. 8. Didy kely ekena ary tsingerina famokarana haingana. 9. Mpivarotra natokana sy QC ...
Acrylic mihodina mampiseho latabatra karatra mazava dokam-barotra Stand Stand
Anaran'ny vokatra latabatra enina miorina amin'ny latabatra mpamadika loko Mangarahara habe 180 * 180MM matevina 4MM MOQ 100 pcs OEM / ODM azo alaina ary tongasoa Carton akrilika fonosana azo raisina.
Seho solomaso akrilika, Magnetic Acrylic Sign mpihazona, Mpihazona Sign Countertop, Aseho fihodinana akrilika mihodina, Mpihazona famantarana vita amin'ny rindrina, Acrylic Block Sign Holder,